BullyingCanada – ukunikeza izingane ezixhashazwa ikusasa eliqhakazile
ukunikeza izingane ezixhashazwayo
umi eduze ukuze asize Thola Usizo Thola Usizo Manje Amaprosesa asekelwe BullyingCanada Ahileleke Ungasiza BullyingCanada uthembele kwabaphanayo
ukwesekwa kwabantu abafana nawe.
esinye sesixazululo somusa sokuxhashazwa
Sikhona ukuze sikusekele zonke izinyathelo zakho.
BullyingCanada iyona kuphela inhlangano kazwelonke exazulula izimo zobuxhwanguxhwangu entsheni yaseCanada ngokwenza ngokuqondile ukuxhumana phakathi kwezingane ezixhashazwayo, abahlukumezi bazo, abazali, othisha, amabhodi esikole, izinsizakalo zezenhlalakahle, futhi, lapho kudingekile, amaphoyisa.
Sijoyine. Londoloza Izimpilo.
Ukwesekwa kwethu okubalulekile kunikwe amandla amavolontiya nabanikeli njengawe.
Amashumi ezinkulungwane zentsha kulo lonke izwe athembele kuyo BullyingCanada ukuze babasize baphinde bathole ukuphepha kuziqhwaga cishe kuyo yonke imiphakathi.
24/7 inethiwekhi yokwesekwa kuzwelonke yentsha exhashazwayo.
Imihlangano yokucobelelana ngolwazi yomphakathi idala imiqondo evulekile futhi ivikele izingane.
Imifundaze inika intsha amandla okuba abaholi bomphakathi.
Ukukhuthaza ngokungakhathali izisulu zokuxhashazwa kwentsha.
Wonke Umzuzu Ubalulekile
sisize siphendule izincingo zosizi
ukukhalela usizo kwaphendulwa ngo-2021
izikhathi oxhumana nabo abengeziwe abenziwe nabo BullyingCanada ngo-2021, uma kuqhathaniswa ne-pre-bhubhane 2019
izivakashi eziya BullyingCanada.ca ngo-2021
Nsuku zonke sithola izikhalo ezingaphezu kwenkulungwane zokucela usizo. Usizo lwenu lomusa lubalulekile ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zentsha yesizwe sakithi ehlukunyezwayo.
URob Benn-Frenette, ONB , Umsunguli Wokubambisana
Ayikho ingane okufanele iphoqwe ukuthi iyeke isikole ngoba ayiphephile kuyona—leso ngesinye sezizathu eziningi esazisungula. BullyingCanada.
U-Katie Thompson (Neu) , Umsunguli Wokubambisana
Nikeza izingane ezixhashazwa ikusasa eliqhakazile.
Joyina BullyingCanada ekuhlinzekeni ngezinsiza ezibalulekile, ezisindisa impilo kanye nosizo entsheni yesizwe esengozini kakhulu. Ziningi izinketho ongazibandakanya—kusukela ekubeni ngomunye wabanikeli bethu abaphanayo ukuya ekuvolontiyeleni olayini bosekelo noma ukusiza ihhovisi elingemuva. Xhumana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi.
Yiba Umzila Wokuphila
Sonke sikulokhu ndawonye—izinkulungwane zentsha zithembele kithi.
Sicela unikele manje, ngoba wonke umzuzu ubalulekile!
Lapho ingane ixhashazwa isikhathi eside, maningi amathuba okuba ibe nezibazi ezingokomzimba, ezingokomzwelo nezingokwengqondo ezingahlala ukuphila kwakho konke. Ubuxhwanguxhwangu bungase buqede ukuzethemba, bushiye izingane zihoxile futhi zingalondekile, zinezinhlungu zesisu, ukwesaba, namaphupho amabi. Abakwazi ukugxilisa ingqondo esikoleni, okuholela ekutholeni amamaki ampofu okungase kunciphise amathuba abo ekusasa. Lapho ubuqhwaga bungapheli, ukucindezeleka nokucindezeleka kungabangela izingane ukuba zizibulale.
Kudinga isibindi esikhulu ngezingane ukuze zifinyelele kithi ukuze zithole usizo. Isipho sakho sizoqinisekisa ukuthi zonke izikhalo ezibuhlungu zokucela usizo ziyaphendulwa, noma iluphi usuku… nganoma yisiphi isikhathi. Umnikelo wakho usisiza ukuthi sinamathele ezinganeni ngoba uma nje kuthatha ukuthi siyeke ukuhlukumeza futhi sibanike ikusasa eliqhakazile!
Yini eluchaza kangcono umbuzo wakho? (*)Ngingomusha futhi ngidinga usizo lokubhekana nokuhlukumeza.Ngidinga usizo ngomnikelo noma irisidi yentela.Ngingathanda ukukhuluma nothile mayelana nokunikeza ifa noma ukuhlelwa kwefa.Ngingathanda ukuvolontiya BullyingCanada.Nginombuzo ojwayelekile noma ukuphawula.Ngiyilungu labezindaba futhi ngifuna ukuxhumana.Angisafuni ukuba sohlwini lwakho lwamakheli.
Singathembela ekusekeleni kwakho?
Isaziso Esibalulekile Mayelana Nobhubhane Lwe-COVID-19 Oluqhubekayo
Ngenxa yokukhathazeka kwamanje kwezempilo emhlabeni wonke kanye nezinsiza ezilinganiselwe, BullyingCanada izosebenza ngenani eliphansi ngezinsizakalo ezibalulekile kuphela. Lokhu kusho ukuthi izinsiza zethu (i-imeyili, ingxoxo ebukhoma, ukusekela umbhalo, nezintambo zocingo) zizotholakala ngokuqondile entsheni ngesikhathi sobhubhane. Bonke abanye abantu bazofakwa emgqeni ukuze balandelelwe ngokuhamba kwesikhathi.
Ngiyabonga ngokuqonda kwakho.